यी ३ राशी भएकी बुहारीले भित्र्याउछन अपार सुख ,शान्ति र धन !! | सुदुरपश्चिम खबर
यी ३ राशी भएकी बुहारीले भित्र्याउछन अपार सुख ,शान्ति र धन !!
(gnewsnepal बाट सभार)
ज्योतिशी शास्त्रीका अनुसार तपाईको घरमा विहे गरेर भित्र्याएको नयाँ बुहारीको राशीले पनि घरमा शुभ वा अशुभ भन्ने कुरा थाहा हुने बताउछन् । किनभने हरेक परिवारले आफ्नो घरमा बुहारी ल्याएपछि सुख ,शान्ति हुन्छ भन्ने नै विवाह गर्ने गर्दछन् । तर विवाह गरेको केही समयपछि यो सम्बन्धमा चिसोपना आउछ । त्यसैले यदि तपाई पनि घरमा नयाँ दुलही ल्याएपछि सुख , शान्ति र धनआर्जन गर्न चाहनुहुन्छ यी ३ राशी भएका युवतीहरु विहे गर्नुस् । लक्ष्मी समान हुन्छन् ।
बृष राशीः वृष राशि भएका युवतीहरु विहे गर्न एकदमै राम्रो हुन्छ । किनभने उनीहरु सहनशक्ति भएका र हरेक कुराहरुलाई सामान्य तरिकाले हल गर्न सक्ने स्वभावका हुन्छन् । जसले परिवारको सदस्यमा नबुझने व्यक्तिहरु भएमा पनि बुझाएर राख्न सक्छन् । त्यस्तै निडर र आफै निनर्य लिन सक्ने हुन्छन् ।
कन्या राशीः यो राशी हुने महिलाहरु शान्त , वुद्धीमानी र समझदार स्वभावका हुन्छन् । जसले परिवार र समाजमा आएको कठिन समस्याहरुको पनि समाधान गर्दछन् । जो एक परिवारको मात्र नभएर देशकै उच्च पदमा पुग्ने क्षमताका हुन्छन् । त्यसैले यो राशीलाई अति नाम जस्तै कन्या मानिन्छ ।
मीन राशीः मीन राशि हुने बुहारीहरु पनि कसैको घरमा भित्रिएमा अति राम्रो मानिन्छ । किनभने उनीहरुले आफ्नो पतीको र परिवारको निकै ख्याल गर्ने गर्दछन् । यदि कसैले परिवारको बारेमा कुरा मात्र गरेपछि जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि पछि पदैनन् । र सानालाई माया गर्ने र ठुलालाई सम्मान गर्ने गर्दछन् । (gnewsnepal.com बाट सभार)
पिपलको यसरी पुजा गर्नाले परिवारमा सधैं सुख,शान्ति हुने छ !!
यी उपाय अपनाउनुभयो भने तपाइको दाम्पत्य जीवन सफल हुन्छ !